Best video gaare software: sida loo sameeyo video ah
> Resource > Video > Best Video Software G Windows 8
Marka aad qabsadaan daqiiqad u qurux badan, samaynta video ah waa fikrad fiican inaad la wadaagto la joogo in dadka kale. Waxaa jira dhowr ah kii sameeyey software video arrin la sameeyey oo waa la heli karaa maalmahan, kaas oo fursad kuu siinayaan inaad mid effortless. Si kastaba ha ahaatee, DVD Slideshow Builder Deluxe , barnaamij video gaare dhan-in-hal, hubaal taagan iyaga. Waxay bixisaa badan oo xul ah 2D cajiib ah oo lagu furdaamiyo iyo 3D, noocyada kala duwan ee kala guurka iyo saamaynta iwm Oo ma caawisaa oo kaliya inaad u samaysaa effortless video ah, laakiin sidoo kale badbaadiyo video tayo-qeexidda sare iyo daabacaan on YouTube si toos ah.
Halkan aan aragno sida loo sameeyo video ah leh this video software gaare wanaagsan ee Windows 8 . software Tani waxay noqon kartaa kale oo fiican in la imovie for Windows 8 isticmaala. Just raac tallaabooyinka iyo waxaad ka heli doontaa in samaynta video ah uu noqon karaa mid si fudud!
1 dar photos iyo music in sawir video gaare
Download iyo rakibi DVD Slideshow Builder Deluxe. Waxaad ka heli doontaa waxaa jira laba hababka: Mode Standard iyo Advanced Mode. Halkan waxaan ku qaadan Advance Mode sida tusaale ahaan.
Dooro Advanced Mode iyo aad bilaabi doonaa ka Abaabulaan tab. Bilow samaynta video ah adigoo gujinaya "Add Files" button. Markaas dajiyaan sawiro aad jeceshahay ama videos in storyboard ah. Haddii aad jeceshahay, double guji warbaahinta bartilmaameedka in xaalkaa in daaqadaha pop up ka.
2 shakhsiyeeyo video sida aad jeceshahay
Tag ah "shakhsiyeeyo" tab iyo guji "Music" button ku darto music soo jeeda. In waqtiga hoos ku qoran, waxaad u soo jiidi kartaa slider si uu u sameeyo music ku habboon ee sawiro iyo videos laga keeno.
In tab tan, waxaad bedeli kartaa guurka sawir adigoo gujinaya guurka suulka dooro kala guurka sida aad jeceshahay. Waxa kale oo aad ku dari kartaa saamaynta badan si ay video ka. Tusaale ahaan, guji "Intro / Credit" suulka ku darto Intro ama Credit si aad video sida ay mawduuca.
3 Save video iyo wadaagaan online
Tag "Abuur" tab, waxaa tahay fursado dhowr ah si aad u badbaadiyo video:
Guba si DVD: doorto DVD menu la jecel yahay oo la shakhsiyeeyo sida ay baahidaada (haddii aadan u baahnayn menu ah, u tag DVD tab Menu hoose oo hubi "DVD Menu Disable" doorasho markaas aad video gubi in DVD in daqiiqo. .
Save si aad u computer: doortaan qaab wax soo saarka ka mid ah liiska ku dhow oo dhan oo caan ah qaabab video ah.
Save the qalab mobile: badbaadiyo video ay u Qalabka telefoonada gacanta oo caan ah sida iPad, iPhone, Blackberry, Nokia iyo wixii la mid ah.
La wadaag in YouTube: buuxi macluumaadka account YouTube iyo geliyaan aad video in YouTube si toos ah.
Hadda download this imoive for Windows 8 video gaare oo aad video u gaar ah!
Ka dooro Kan sameeyey Xaqa Video Muqaal: Photos ka dhig Video
Best Photo Muqaal sameeyey, Sida loo sameeyo Photo Muqaal ah
Top 20 TV Player Apps, aad ka ogaato
Sida loo Download Flash Videos u Free